Fly Basic Economy: Rafitra fanolorana fampiasàna kabine amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Fly Basic Economy: Rafitra fanolorana fampiasàna kabine amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka?
Fizahan-tany azo idirana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • Vaovao farany momba ny Hawaii • LGBTQ • Vaovao • teknolojia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fikaroham-piaramanidina mora indrindra sy ny seranam-piaramanidina tsara indrindra ary ny fitadiavana fiaramanidina kilasy toekarena fototra amin'ny zotram-piaramanidina amerikana, United, Delta ary ny sidina hafa dia manana tombony mazava: Ny tombony dia ny vidiny, sa lasa voafitaka ianao? Tian'ireo kaompaniam-pitaterana ho mahantra araka izay tratra ny dianao, ka tsy hanao izany fahadisoana izany intsony ianao. Fifanakalozan-kevitra amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina.
Mazava ho azy, ny safidy amin'ny vidin'ny toekarena ifotony dia manome mpanjifa an'habakabaka mividy herinaratra miaraka amin'ny maodely a la carte — mandoa izay tianao fotsiny, na seza efa voatendry mialoha izany na fidirana amin'ny fitoeram-bokatra, kitapo, kilaometatra manidina matetika, toerana na tsotsotra toa ny fitadiavana fomba hanaovana varotra ny fampiasana lavidavitra fiaramanidina. eTN nitatitra momba ny American Airlines mangataka mpandeha iray mba hikotrika anaty kitapo.
Tamin'ny taona 2017, nisy mpandeha iray tao amin'ny Ryan Air izay voasazy 100 $ noho ny tsy fampiasana ny trano fidiovana. A Ny sidina Ryanair avy any Leeds mankany Faro, Portugal, dia nampandeha ny lavidavitra rehetra. Tsy maintsy nivalan-drano izy, ka tavoahangy no nampiasainy ary nampandoavina lamandy izy noho izany.
Any Eropa, ara-dalàna ny fandoavana ny fampiasana ny trano fidiovana amin'ny toeram-bahoaka, trano fisakafoanana na toeram-pizahan-tany. Tokony hampidirina ao anaty rafitry ny saram-pandraharahana ve ireo lavaka fiaramanidina?
Any amin'ny fanjakana amerikana sasany, tsy ara-dalàna ny fandoavana vola ho an'ny trano fidiovana, fa ny zotram-piaramanidina dia eo ambany fahefan'ny Federal na ny any ivelany. Topazo maso ny zavatra ho hitan'ny mpizahatany rehefa mampiasa trano fidiovana any Eropa izy, ary ampitahao ity zavatra hitranga amin'ny fampiasana trano fidiovana amin'ny torapasika toa an'i Florida na Hawaii ity.
Ny fandefasana tavoahangy fa tsy ny trano fidiovana dia zakan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ao anatin'izany ny United Airlines: "Tsy miantso ny polisy amin'ny mpanjifa intsony izahay raha tsy hoe atahorana ny fiarovana." Tsy nanao fampanantenan-tena toa izany i Ryanair. Niantso ny polisy izy ireo hihaona amin'ny fiaramanidina, ary ilay mpandeha voalaza etsy aloha mampiasa ny tavoahangy dia nampandoavina lamandy 90 Pounds.
Ny zotram-piaramanidina dia miantehitra amin'ny rafitra caste sy kilasy hiteraka fidiram-bola sy laza.
Ity misy vahaolana mety:
Ireo mpandeha kilasy voalohany mandoa ny sarany feno ary tsy mandeha amin'ny fanavaozana dia mbola mahazo fidirana manokana sy manokana mankany amin'ny trano fidiovana kilasy voalohany, anisan'izany ny losion amin'ny tarehy.
Ny mpikambana premium sy ireo mandeha amin'ny saran-dalamby ara-toekarena ara-toekarena dia mahazo fidirana malalaka amin'ny trano fidiovana iray - trano fandroana ara-toekarena - saingy tsy tafiditra ao ny menaka tarehy sy lamba famaohana taratasy.
Ireo mpandeha ara-toekarena ifotony dia mahazo fidirana amin'ny rafi-pividianana an-tserasera hampiasa ny lavatory. Ny fidirana toy izany dia mivelatra amin'ny mpandeha rehetra raha misy tsipika ary mety hiditra elatra mankany amin'ny trano fandroana kilasy voalohany na toekarena.
Ireo mpandeha dia afaka mampiasa ny solosaina findainy na ny takelaka fisoratany hiditra ao amin'ilay rafitra miaraka amin'ny carte de crédit. Ny tolotra avo indrindra dia miantoka ny laharam-pahamehana voalohany.
Ireo mpandeha tsy manana carte de crédit dia mila mividy karatra visa mialoha alohan'ny hidirany amin'ny fiaramanidina satria faritra tsy manam-bola io sidina io.
Ny olon-drehetra dia mila mampiasa tavoahangy ary mandoa onitra aorian'ny fipetrahana.
Hampahery ny mpandeha izany raha ny tena izy handoa ny seza kilasy voalohany fa tsy hiantehitra amin'ny fanavaozana maimaimpoana. Izy io dia hiteraka fidiram-bola ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, hanafoana ny tsipika ary hikolokoloana ireo kaompaniam-pitaterana rafitra caste izay tena tehirizina. Ny olon-drehetra manitsakitsaka ny lalàna toy izany dia tokony mikasa ny hisambotra rehefa tonga.
Any Russia, an Lehiben'ny kaompaniam-pitaterana no voasambotra noho ny fisotrony amin'ny fefy Putin ao Sochi, araka ny voalaza eTurboNews.